Kooxda Trump oo qaadaysa tallaabadii ugu dambeysay ee ka dhan ah Joe Biden |
Kooxda Trump oo qaadaysa tallaabadii ugu dambeysay ee ka dhan ah Joe Biden
Koox ka mid ah senetarrada Mareykanka ayaa sheegaya inay gaashaanka u daruuri doonaan inay caddeeyaan guusha uu doorashada ka gaadhay Joe Biden haddii aan guddi loo saarin baaritaanka musuqmaasuq ee la sheegay in lagu sameeyay doorashadii bishii Nofeembar ka dhacay Mareykanka.
11-ka xubnood oo ka tirsan senetarada xisbiga Jamhuuriga oo uu hogaaminayo Ted Cruz ayaa doonaya in 10 maalmood dib loo dhigo si caddeeyaan eedeymaha aan xaqiiqda loo hayn, inkastoo aan la fileyn in ay ku guuleysataan.
Madaxweyne Donald Trump ayaa diiday inuu qiro guusha Biden, isagoo si isdaba joog ah u sheeganayay in looga shubtay doorashada isagoo aan bixin wax caddeyn ah. Dadaalkiisii sharci ee uu ku doonayay inuu ku rogo natiijooyinka ayaa waxaa si weyn u diiday maxkamadaha.
Wuxuu heystaa kaliya hal guul, oo ku saabsan tiro yar oo waraaqaha boostada ah ee Pennsylvania, mid ka mid ah gobolada Mr Biden uu ku guuleystay tartankii sanadkii hore. Madaxweyne ku xigeenka Mike Pence ayaa joojiyay in uu ka dhawaajiyo eedaha Mr Trump ee musuqmaasuqa doorashada.
Laakiin Sabtidii, ayuu madaxiisa shaqaalaha Marc Short wuxuu sheegay in Mr Pence “uu soo dhaweynayo” dadaalkan ugu dambeeyay ee ay sameeyeen xildhibaanada si ay “u diidaan shaacinta najiidaha ee 6-da Janaayo.